Maxamed Bin Salmaan: Waan ciqaabi doonnaa dambiileyaashii dilay Jamal Khashuqji - BBC News Somali
Image caption Sacuudiyiinta ayaa horay u beeniyey eedamaymaha la xiriira in Dhaxal Suguhu kaalin ku lahaa dilka.
Dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa ballan qaaday in la ciqaabi doono "Dambiileyaashii" masuulka ka ahaa dilkii wariye Jamal Khashoggi ee Turkiga lagu dilay.
Asagoo ka hadlayey madasha ganacsiga ee ka dhacaysa Riyadh, Mohammed bin Salman ayaa yiri "Fal dambiyeedkaas waxa uu xanuun ku ahaa dhammaan dadka reer Sacuudi" mana noqo doono mid aan ku kala tagno Turkiga.
Waa markii ugu horraysay ee uu si rasmi ah uga hadlo arrintan tan iyo markii Sacuudigu uu qirtay in Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda.
Image caption Dhaxal Sugaha Sacuudiga ayaa la kulmay wiilka Khashogg, ee Salah.